Etu esi emegharị bọlbụ ọkụ: ụdị, ihe emere ha na ebe a na -atụfu ha | Mmeghari ohuru Green
Ọkụ ọkụ bụ ihe mkpofu ezinụlọ na -ahụkarị n'ụlọ ọ bụla. Ighagharị bọlbụ abụghị ihe dị mfe ịme. A na -emegharị ụdị bọlbụ ọ bụla n'ụzọ dị iche, n'eziokwu, anaghị arụgharị ụfọdụ bọlbụ. E nwere ọtụtụ ndị na -amaghị megharịa bọlbụ ma ọ bụ ihe a ga -eme ha.
Yabụ, anyị ga -arara akụkọ a ka ọ gwa gị ihe niile ịchọrọ ịma gbasara otu esi ejigharị ọkụ ọkụ na ihe njiri mara ha.
1 Na -emegharị bọlbụ ejiri
2 Ofdị bulbs
3 Otu esi eji ọkụ emegharị ọkụ ọkụ
4 Ebe a na -emegharị ha n'ụdị ha
Na -emegharị bọlbụ ejiri
Agbanyeghị na ọ dị ịtụnanya, dịka anyị kwuru na mbido, ọ bụghị ọkụ niile ka enwere ike imegharị. Agaghị etinye oriọna halogen na ọkụ ọkụ ọkụ na WEEE, nke Ọ bụ iwu nke na -ahazi njikwa gburugburu ebe obibi nke ọkụ eletrik na ngwa elektrọnik n'efu.
Yabụ, anyị nwere ike imegharị bọlbụ fluorescent, bulbs bulbs, na LEDs. Anyị nwekwara ike imegharị oriọna. N'aka nke ọzọ, a naghị emegharị halogen na bulbs incandescent. Agbanyeghị, dịka ị ga -ahụ ma emechaa, enwere ike iji ha rụọ ọrụ ọmarịcha Mee N'onwe Gị. Nke a ga -adabere n'ụdị bọlbụ anyị chọrọ ịtụfu, n'ihi na njikwa CFL (obere oriri) ọ dị iche na ijikwa bọlbụ LED. Ọ dịghị mgbe ị ga -atụba bọlbụ ahụ n'ime akpa iko.
Enwere ọtụtụ ụdị ọkụ ọkụ ma dabere n'ụdị ha, a ga -eburu n'uche akụkụ ụfọdụ. Ka anyị hụ ihe ha bụ:
Filament bulbs: Ebe ọ bụ na ụdị ihe ọkụ ndị a, dị ka oriọna halogen, enweghị ike imegharị ha, anyị ga -atụfu ha na igbe ntụ ntụ ma ọ bụ nke gbara ọchịchịrị (dabere na ọnụ ọgụgụ ndị mmadụ). N'ime akpa mkpofu a, nke a na -akpọkwa nke fọdụrụ, a na -atụfu ihe ndị ahụ na -enweghị akpa nrụgharị nke ha.
Ịchekwa ume ma ọ bụ ọkụ ọkụ: Ụdị bọlbụ a nwere mercury, yabụ enweghị ike ịwụfu ya na ihe mkpofu ma ọ bụ ihe ọ bụla megharịgharị. Ọ dị mkpa ịkpọga ha ebe dị ọcha ebe a ga -ekpofu ha n'enweghị nsogbu maka ịmegharị ọzọ.
Ọkụ LED: Igwe ọkụ ndị a nwere ngwa elektrọnịkị eji emegharị emegharị. Iji nwee ike ijikwa ha nke ọma ọ dị mkpa ịkpọga ha ebe nhicha dabara.
Otu esi eji ọkụ emegharị ọkụ ọkụ
Ijighachi ihe eji eme ihe, nke a kacha mara dị ka nkwalite nkwalite, na -agụnye ịtụgharị ngwaahịa tụfuru ma ọ bụ na -abaghịzi uru n'ime ngwaahịa ọhụrụ nwere ogo ma ọ bụ uru gburugburu ebe obibi. A naghị atụ aro ka ị jiri bọlbụ fluorescent na ụdị ọrụ a, n'ihi na ha nwere mercury na -egbu egbu nke ukwuu. N'ọnọdụ a, anyị ga -eweta ụfọdụ echiche iji nye ojiji ọhụrụ maka bọlbụ incandescent ochie.
Obere ite: Site n'iwepụ akụkụ nke mkpuchi na waya dị n'ime, anyị nwere ike iji bọlbụ ahụ dị ka ite ite iji tinye obere okooko osisi. Anyị nwere ike tinye ntọala n'elu ha wee chọọ tebụl ma ọ bụ shelf mma, ma ọ bụ ọ bụrụ na anyị etinye ụdọ ma ọ bụ eriri iji kpọgide ha, anyị ga -enwe ọmarịcha ogige kwụ ọtọ.
Uwe elu: Bọlbụ ahụ tọgbọ chakoo n'ime, naanị anyị ga -etinye simenti na ya, tinye nkedo n'ime ya ma chere ka ọ sie ike. Ugbu a, anyị ga -eme obere oghere na mgbidi wee debe akwa mkpuchi anyị. Anyị nwekwara ike iji ya megharịa aka nke ụdị ọnụ ụzọ niile.
Oriọna mmanụ: Dị ka oge niile, ihe mbụ ị ga -eme bụ iwepu eriri ahụ na bọlbụ ahụ. Ọzọ anyị ga -etinye mmanụ ma ọ bụ mmanya maka oriọna ma ọ bụ ọwa ma debe oriọna.
Ihe ịchọ mma Krismas: Anyị nwere ike iji bọmbụ ochie ole na ole mepụta ihe ịchọ mma nke anyị maka osisi ekeresimesi. Naanị ihe anyị ga -eme bụ iji ihe ebumnobi anyị kacha amasị ha ma gbakwunye obere eriri iji kpọgide ha.
Terrariums: Site na obere okwute na obere osisi ma ọ bụ mpempe akpa, anyị nwere ike ịme terrarium. Dị ka ọ dị na obere ite ite, anyị nwere ike idowe ntọala ma ọ bụ kpọgide ha.
Ụgbọ mmiri na bọlbụ: N'otu aka ahụ dị ka a ga -asị na ọ bụ karama, anyị nwere ike rụọ ụgbọ n'ime bọlbụ ọkụ anyị.
Ebe a na -emegharị ha n'ụdị ha
Ọkụ ọkụ bụ ihe na -eji ọkụ eletrik eme ka ìhè dịrị n'ụlọ anyị mgbe anwụ na -apụ n'anya. Enwere ọtụtụ ụdị ọkụ ọkụ nwere ike ịhazi nke ọma dabere n'ike ike ha, ogologo ndụ ha, ma ọ bụ oke ọkụ ha na -ewepụta. Ndị a bụ isi ụdị ọkụ ọkụ dị adị:
na oriọna bọlbụ ha bụ bọlbụ ọdịnala. Na 2012, amachibidoro imepụta ya na EU n'ihi obere ndụ ya na oke oriri ya.
La bọlbụ halogen ọ na -amụnye nnukwu ọkụ wee gbanye ozugbo. Ha na -ewepụta oke ọkụ na ndụ ha bara uru nwere ike ịgbatị.
na Ike oriọna na-azọpụta ọkụ ha nwere ogologo ndụ karịa bọmbụ ndị gara aga ma na -arụ ọrụ nke ọma.
Obi abụọ adịghị ya na duru bọlbụ ha bụ ndị kacha adigide n'ahịa. Ha enweghị tungsten ma ọ bụ mercury, nwee ndụ ogologo ndụ kacha ogologo ma rie obere ihe karịa ngwaahịa niile akpọrọ n'elu.
Ị nwere ike iche na bọlbụ nwere ike iburu ihe iko ga -abanye n'ime akpa akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ, mana nke a adịghị mma. Na mgbakwunye na iko, bọlbụ ahụ nwere ọtụtụ ihe ndị ọzọ, nke a ga -ekewapụ tupu ekpofu ya. Ọ bụ ya mere a ga -eji kpochapụ bọlbụ ahụ.
Iji mee ka ọrụ a dị mfe na imegharị ihe mkpofu nke ọma, AMBILAMP (nzukọ anaghị akwụ ụgwọ nke na-ezube imepụta mkpokọta mkpofu na usoro ọgwụgwọ dị otú ahụ) ewepụtala ihe ndị ọzọ ga-ekwe omume. Ebe mkpofu mkpofu ọkụ, ebe nwa amaala ọ bụla nwere ike were were were ha. Na mkpokọta, isi ihe ndị a dị na ụlọ ọrụ ma ọ bụ ndị na -ekesa ngwa ụlọ, dịka ụlọ ahịa akụrụngwa, ụlọ ahịa ọkụ ma ọ bụ nnukwu ụlọ ahịa, ebe nwa amaala ọ bụla nwere ike were ọkụ ọkụ ejiri. Karịsịa, isi nchịkọta ndị a na -elekwasị anya na nchịkọta ọkụ oriọna na -enwu ọkụ, oriọna na -azọpụta ike, oriọna na -agbapụta agba, oriọna LED na oriọna ochie.
Usoro imegharị ọkụ nke bọlbụ na -amalite site na ikewapụ ihe ndị mejupụtara ha. A na -ekewa mercury na phosphorus mgbe usoro nsachapụ wee chekwaa ya nke ọma. Plastik na -aga osisi na -emegharị plastik, iko na ciment osisi, iko na seramiiki, na ọla na ntọala. Ha niile ga -enye ihe ọhụrụ.
Enwere m olile anya na site na ozi a, ị ga -amụtakwu gbasara otu esi ejigharị ọkụ ọkụ.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akwụkwọ ndụ akwụkwọ ndụ Green » Gburugburu » Nzughari » Egweri oriọna bọlbụ
Gịnị bụ ọla